Kpọọ maka Abstracts
Anyị na-akpọ ndị na-eme nchọpụta na ndị gụrụ akwụkwọ ka ha nyefee akwụkwọ akụkọ na nyocha ka a ga-atụle maka ogbako mmụta agụmakwụkwọ Philanthropy nke Africa. A ga-atụle akwụkwọ ndị pụtara ìhè ka e bipụta ya na International Review of Philanthropy and Social Investment Journal.
Kemgbe mmalite anyị na 2018, anyị nọ na Center on African Philanthropy and Social Investment (CAPSI) ahụla nnukwu ihe ịga nke ọma n'ịkpọkọta mkparịta ụka na ịkwado nyocha banyere akụrụngwa enyemaka na ntinye ego na-elekọta mmadụ na Africa.
N'oge a, anyị anabatala ogbako mba ụwa abụọ na Philanthropy na Africa, nyefere nyocha maka ọrụ enyemaka obodo, ntọala, na ọnụ ahịa ọnụ ahịa dị elu n'ofe Africa, naanị ịkpọtu ole na ole. N'ịgbakwụnye, CAPSI emela nke ọma na-eduzi ọmụmụ ihe-ọkwa gụchara nke rụpụtara na-agụsị akwụkwọ Ph.D ole na ole. ụmụ akwụkwọ ndị n'aka nke agbasawanyela ma gbasaa oke ọmụma banyere ọrụ enyemaka na kọntinent ahụ. Nyere ihe ndị a rụzuru na mbọ ndị a, a na-amata ọzọ na mkparita ụka siri ike yana n'agụmakwụkwọ agbakwunyere gburugburu ihe ọmụma achọpụtara kwesịrị ime n'ụzọ ahaziri ahazi na usoro.
The Nzukọ Ọmụmụ Ihe Ọmụma nke Africa ga-elekwasị anya na usoro na-apụta na ọrụ enyemaka, ka ndị na-eme ihe nwere ike isi na-agagharị na mbara ala ọhụrụ, ma na-agwa amụma maka omume ka mma n'Africa. Nzukọ a ga-ewere ọnọdụ dị ka ihe na-aga n'ihu na ọgbakọ Philanthropy nke 3rd kwa afọ.
Banyere Nzukọ Ọmụmụ
A ga-enwe ọgbakọ na Tuesday 2 Ọgọst 2022 na Johannesburg, South Africa
Nzukọ a bụ mmemme ngwakọ na-enye ma n'ebe ahụ yana nsonye mebere
A ga-atụle Abstracts na-ekpuchi akụkụ ọ bụla n'ime isiokwu ndị a:
Ntụnye nke CSOs/NGO na Social Enterprises nye akụnụba Africa
Ụlọ ọrụ Social Investment na ọdịnihu nke kọntinent
Onyinye Community/Philanthropy – ụdị, udi, na usoro inye obodo yana ntinye aka ha na mmepe n'Africa.
Ọrụ enyemaka mmadụ na mbelata mgbanwe ihu igwe na ime mgbanwe
Ego na itinye ego na-adịgide adịgide
Usoro na-apụta n'inye ihe na inye onyinye
Ndị mgbasa ozi ọha na ndị ọrụ ebere na Africa
SDGs, philanthropy na Social Investment
Teknụzụ, cryptocurrencies, NFTs, na enyemaka enyemaka
Ọrụ ebere na njikwa ọdachi
Philanthropy na mgbanwe sistemu
Ụmụ nwanyị, ndị ntorobịa na ndị ọrụ ebere
Okpukpe na philanthropy
Amụma ọha na enyemaka
Ụbọchị dị mkpa
Ọkwa nke nnabata - Fraịde, Julaị 15, 2022
Oge ngwụcha nke ndebanye aha ọgbakọ - Fraịde, Julaị 22, 2022
Ndị na-achọ ọrụ kwesịrị itinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ 250 n'ụdị akwụkwọ Okwu
Anyị na-anabata abstracts n'asụsụ Bekee na asụsụ Africa ndị ọzọ
Abstracts etinyere ga-enwerịrị ihe ndị a
Aha zuru oke
Aha ndị niile dere
njikọ nke onye ọ bụla na-ede akwụkwọ
abtract nke akwụkwọ
3 - 6 mkpụrụ okwu nke akwụkwọ
Nkwenye ma ọ bụ ọkwa mkpughe (ọ bụrụ na ọ dị)
A ga-atụle kacha nke ntinye akwụkwọ abụọ n'otu n'otu
Naanị abstracts ka a ga-ebipụta na usoro ọgbakọ
Ụgwọ ndebanye aha bụ $ 300 maka agụmakwụkwọ yana $ 150 maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. Achọrọ ihe akaebe nke ndebanye aha ụmụ akwụkwọ
Ndebanye aha ga-abụ nkwado na ntinye niile maka Mgbakọ mmalite na 2022
Onye nhazi ọgbakọ
Iji nyefee nkọwa gị na bulite abstract gị, biko dejupụta fọm dị n'okpuru.
- Họrọ -Ntụnye nke CSOs/NGO na Social Enterprises nye akụnụba AfricaỤlọ ọrụ Social Investment na ọdịnihu nke kọntinentOnyinye Community/Philanthropy – ụdị, udi, na usoro inye obodo yana ntinye aka ha na mmepe n'Africa.Ọrụ enyemaka mmadụ na mbelata mgbanwe ihu igwe na ime mgbanweEgo na itinye ego na-adịgide adịgideUsoro na-apụta n'inye ihe na inye onyinyeNdị mgbasa ozi ọha na ndị ọrụ ebere na AfricaSDGs, philanthropy na Social InvestmentTeknụzụ, cryptocurrencies, NFTs, na enyemaka enyemakaỌrụ ebere na njikwa ọdachiPhilanthropy na mgbanwe sistemuỤmụ nwanyị, ndị ntorobịa na ndị ọrụ ebereDecolonizing philanthropyOkpukpe na philanthropyAmụma ọha na enyemaka
Ị ga-aga ogbako n'onwe gị na Johannesburg ka ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ?